Fihetsiketsehana “fitakiana ny marina”: mpitondra bajaj 17 no efa maty nisy namono tao Toamasina - ewa.mg
News - Fihetsiketsehana “fitakiana ny marina”: mpitondra bajaj 17 no efa maty nisy namono tao Toamasina
Efa miisa 17 ireo
mpitondra Bajaj maty nisy namono tao Toamasina raha anjatony kosa
ireo Bajaj lasan’ireo jiolahy hatramin’izay nisian’ity fitaterana
mandeha kodiaran-telo ity. Nisy ny
fihetsiketsehana nataon’ireo mpitondra Bajaj taorian’ny fahatrarana
jiolahy iray nangalatra Tuc Tuc tao Toamasina…
Raikitra ny fihetsiketsehana
nataon’ireo mpamily Bajaj teo anoloan’ny Lapan’ny fitsarana, omaly.
Miseholany hatrany ny fanafihana ireo mpitondra Bajaj ao Toamasina
ka nahatonga ny fihetsiketsehana nataon’ny fikambanan’ireo
mpitatitra Bajaj mba hanaovana fanadihadihana marina sy
hampisehoana ilay jiolahy nangalatra Bajaj tratran’ny polisy tao
Toamasina, ny alahady teo. Raha hiverenena ny raharaha tany
an-toerana, nisy renim-pianakaviana iray nisakana Tuctuc teo
Tanambao Fahadimy ka nilaza fa handeha ho any Bassin-drano. Nony
tonga tao Mangarano anefa, nisy tovolahy roa nisakana indray hoe
handeha amin’ny Lycée faharoa Tanandava, ity faritra ity izay
matetika ahitana fatina mpamily Bajaj, ny andro rahateo efa somary
takariva tamin’io alahady io. Raha vao niala ny lalam-pirenena
(RN2) faharoa hiditra ny lalana mankany amin’ny Lycée faharoa dia
novelesin’ireo jiolahy tamin’ny maritoa ny lohan’ilay mpamily ka
nianjera. Nentin’ireo jiolahy ilay Bajaj, saingy tsy nanaiky
lembenana ilay mpamily fa nisarangotra ary nanohitra ireo jiolahy
tao anaty Bajaj. Nivadika ilay Bajaj ka voatsindry tao ambany ireo
jiolahy. Tsikaritry ny olona izany ka noraisim-potsiny ireo
Entina kamiao na sambo
halefa any amin’ny faritra hafa ireo Bajaj…
Noho ity raharaha ity, mafana ny
fitakian’ny fikambanan’ny mpandraharaha sy mpamily Bajaj dia ny mba
hamoahana ny marina momba ny famonoana matetika miseho sy ny
halatra Bajaj ao Toamasina. Nohamafisin’ireo mpanao
fihetsiketsehana fa tsy misy hita avokoa ireo Bajaj very ary ireo
mpangalatra voasambotry ny polisy kosa tsy mijanona ela ao
am-ponja. Ny fanadihadiana no nahafantarana fa ny Bajaj very dia
misy mandefa any amin’ny faritra hafa amin’ny alalan’ny sambo na
entina kamiaobe. Afaka mivoaka ity fitaovam-pitaterana ity satria
misy olona mikirakira ny taratasin’ireny Bajaj very ireny. Misy koa
ireo mpandraharaha mpividy Bajaj halatra. Noho izany rehetra izany
ny anton’ny fikorontanan’ny fikambanan’ireo mpamily Bajaj ao
Toamasina niantomboka teo anoloan’ny biraon’ny polisy, ny
alatsinainy ka nitohy teo anoloan’ny fitsarana indray izany, omaly
maraina, mitaky ny hamoahana ny marina sy hampisehoana ireo jiolahy
efa-dahy tratran’ny polisy. “Tsy ny fanaovana grevy no mahavaha
olana fa ny Bajaj rehetra dia tokony hiasa eto an-tanànan’i
Toamasina ihany fa tsy any ivelany. Tsy tokony handeha any
ivelan’ny tanàna satria efa fantatra ny fomba fiadin’ireo jiolahy”,
hoy ny fanazavan’ny polisy avy ao amin’ny Commissariat Central
Sajo sy Jean
L’article Fihetsiketsehana “fitakiana ny marina”: mpitondra bajaj 17 no efa maty nisy namono tao Toamasina a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 19/08/2020
Hisy kara-panondro ny trano eto Antananarivo
Manao ezaka fanisana ireo trano eto an-dRenivohitra ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) amin’izao fotoana. Nisy ny bokin-trano nozaraina manerana ireo fokontany 27 tao amin’ny boriborintany fahadimy, tamin’ny volana Aogositra 2018, ka hatramin’ny febroary 2019 lasa teo, hatao filamatra amin’ny resaka bokin-trano. Niisa 39 000 teo ireo bokin-trano nozaraina ary mbola ny 20% ihany hatreto ireo namerina izany teny amin’ny kianjan’i Mahamasina, ahitana ny birao miandraikitra izany eto anivon’ny CUA amin’ny alalan’ny “Direction de mobilisation des resources (DMR). Tanjona mba ho voaisa ary hanana mari-pamantarana avokoa ireo trano manerana ny Renivohitra.Nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny DMR, Andrianarivony Rakotondrazaka Tolotra f a tahaka ny kara-panondron-trano io boky io. “Mba hanatanterahana ny voalazan’ny lalàna momba ny hetran-trano sy ny hetran-tany, ny lalàna momba ny tanàn-dehibe ary indrindra ny tsy maintsy anaovan’ny mponina fanambarana isan-taona momba ny trano sy tany eny anivon’ny sampan-draharaham-panjakana”, hoy izy. Natao hanamafisana ny fisian’ny tany sy ny trano amin’ny fotoana hanaovana ny fanisana ary mirakitra ny andinindininy momba izany io bokin-trano io. Takin’ny C UA rehefa misy fikitihana hatao amin’ny trano ohatra: fanavaozana, fanitarana, fandrodanana sy fanatsaràna io kara-pandron’ny trano io…Maro ireo tombontsoa ho azo amin’ny fampiasana ity bokin-trano ity. Eo ny fahafantarana ny hetra tokony haloa eny anivon’ny CUA. Ny fanamarinana ny fisian’ny trano, ny fangaraharahana , ny fiadiana amin’ny kolikoly… Manentana ireo mponina ao amin’ny boriborintany fahadimy efa nahazo ny bokin-trano ny kaominina mba hamerina izany eny amin’ny biraon’ny DMR etsy Mahamasina. Entanina koa ireo mbola tsy nahazo izany tao amin’ity boriborintany ity mba haka ny azy eny amin’io birao io na koa ireo mila fanampim-panazavana.Synèse R. L’article Hisy kara-panondro ny trano eto Antananarivo a été récupéré chez Newsmada.
Tsy fanodinana sarimihetsika no nataon’ny ekipan’ny « Scoop Digital » teny amin’ny EPP Ambohipo, androany sabotsy 27 aprily 2019 fa fandraisana anjara amin’ny fanampiana ny mpiara-belona. Tamin’ny alalan’ny fikambanana FAN’dio dia nanatevin-daharana ny hetsika « tagnamaro : andron’ny olom-pirenena » ny ekipan’ny trano mpamokatra sarimihetsika « Scoop Digital ». Nambaran’ny tomponandraikitra ao amin’ny fikambanana, Razafimandimby Mamitiana fa hetsika efa fanaon’ny fikambanana hatramin’izay ny asa fanadiovana. Ho fandraisana andraikitra amin’ny maha olom-pirenena sy fanentanana ny hafa dia niara-nientana tamin’ny tagnamaro, notarihin’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina izahay, araka ny fanazavany. Fikambanana mpanao asa fanadiovana ny FAN’dio. Anisany nitondra ny anjara birikiny tamin’ny fanomezana fitaovana ampiasaina amin’ny fandokoana sy loko ny fikambanana nandritra ny hetsika. Ankoatra izany dia nanampy tamin’ny fanadiovana ny tokontanin-tsekoly, ny fandokoana ny tamboho ary ny fanamboarana ny zaridaina tao amin’ny EPP Ambohipo ny mpikambana ao amin’ny FAN’dio. Lynda A. Cet article FIKAMBANANA FAN’DIO: Nanatevin-daharana ny « tagnamaro » est apparu en premier sur déliremadagascar.
Tratran’ny polisy mpanao fisafoana teo ampitaterana bidao miisa valo amby telopolo teny Manjakaray IID ny lehilahy roa, ny marainan’ny zoma lasa teo. Nihanika tamboho ireo mpangalatra nitatitra an’ireo entana halatra ireo. Fantatra fa tsy vao sambany izy roalahy ireto no nanao hala-botry teny amin’iny faritra iny. L’article Hala-botry est apparu en premier sur AoRaha.
Fiatrehana fifidianana: nametraka paikady amin’ny propagandy ny “IIIe”
Mipetraka ny stratejia hiatrehana ny fifidianana fiiloham-pirenena, fihodinana faharoa. Tsy vitan’ny kabary sy famoriam-bahoaka fotsiny ihany izany. “Mandeha andiany 100 ireo mpikambana ary mitety isan-tokantrano, midina any anaty fokontany 34 any. Miara-miasa amin’ny fikambanana maro ety amin’ny boriborintany fahatelo koa izahay amin’izany hanentana ny olona hifidy ny kandidà Rajoelina”, hoy ny mpitarika ny fampandaniana ny kandidà laharana faha-13, Rahantason Mamy. Nanao hetsika fanentanana tetsy amin’ny zaridaina Henri Fraise Ankorondrano izy ireo, ny asabotsy teo. Nanentanana ny olona handeha hijery sy hanamarina ny anarany indray amin’ny lisi-pifidianana izany mba tsy ho very zo. Manampy sy manohana izany ireto mpitarika ireo ary manoro lalana ny olona ny tokony hatao rehetra ary koa tsy ho variana. “Tsy hoe efa nandresy tamin’ny fihodinana voalohany ka hipetra-potsiny fa entanina hatrany ny olona. Eo koa ny fampianarana ny fampiasana ny biletà tokana tsy ho lasa vato maty”, hoy ihany izy.Randria L’article Fiatrehana fifidianana: nametraka paikady amin’ny propagandy ny “IIIe” a été récupéré chez Newsmada.
Fetim-pirenena Amerikanina :: Niantso firaisankina ny masoivohon’i Etazonia
“Ny taotrano tsy efan’ny irery”. Io fehezan-teny io noentin’ny masoivohon’i Etazonia, Michaell Pelletier namintina ny hetahetan’ ny fitondram-panjakana amerikanina hanamafy ny fiaraha-miasany amin’ny fitondram-panjakana malagasy. Hafatra napetrany tao anatin’ny kabary noentina nanamarihana ny tsingerin-taona faha-243 nahazoan’i Etazonia ny fahaleovan-tenany sy ny faha-150 taona mahery nisian’ny firahalahiana teo amin’ity firenena ity sy i Madagasikara, ny hisian’ ny firaisankina eo amin’ireo mpiray firenena, na samy Amerikanina io na samy Malagasy. “Samy mitondra anjara biriky hananganana ny trano tokoa ny tsirairay, ary isika ireo miaraka no manamafy ny fototra ijoroany. Koa amin’izao anohizan’i Madagasikara mandrafitra sy manamafy ny fototra ijoroany izao, dia hijanona ho mpiara-miasa akaiky aminy izahay ary hitondra ny anjara birikinay. Hotohizanay ny famoronana tetezana ara-kolontsaina eo amin’ny firenena sy vahoakan­tsika roa tonta. Hotohizanay ny fanabeazam-boho ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry ny politika, toe-karena, sosialy, tontolo iainana ary tafika”, hoy i Michaell Pelle­tier nandritra ny kabary fanoka­fana ny fanamarihana ny fetim-pirenena amerikanina, ny zoma 28 jona 2019 lasa teo. Ny 4 jolay 2019 izao no ivon’ny fankalazana ny fetim-pirenena amerikanina. L’article Fetim-pirenena Amerikanina :: Niantso firaisankina ny masoivohon’i Etazonia est apparu en premier sur AoRaha.
Pilo kely #4492 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4492 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.